Porsche AG nke 6 mbu nke 133 Kunyere ugbo ala - RayHaber
HomeỤWAEurope49 GermanyOge mbu nke 6 nke 133 nke ugbo ugbo site na Porsche AG
02 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 49 Germany, Europe, ỤWA, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire 0
Porsche Agden rere puku ugbo ala na ọnwa mbu
Porsche AG mụbara ego ahịa ahịa ụwa niile site na 2019 na ọnwa isii mbụ nke 9.
Porsche AG kwupụtara nsonaazụ ego ọnwa isii mbụ maka afọ 2019. Salestụ ahịa nke Porsche mụbara site na 9 pasent ruo ijeri euro nke 13,4 karịa otu oge nke afọ gara aga. Nsonaazụ arụmọrụ tupu ihe ndị pụrụ iche mụbara site na 3 ruo narị ijeri euro. Companylọ ọrụ ahụ nyefere ndị ahịa 2,2 puku 2 ụgbọ ala dịka njedebe nke June, ebe nnyefe mụbara pasent 133. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ruru ndị ọrụ 484 puku 2019, na-abawanye pasent 5 na ọkara mbụ nke 33.
Onye isi oche Porsche AG Oliver Blume kwuru, “Nsonaazụ mbụ nke ọnwa isii anyị nyere ntọala siri ike maka afọ ọrụ 2019 na-aga nke ọma. na GT911. ”
Lutz Meschke, Porsche osote onye isi ala na onye isi ọrụ na-ahụ maka ego / IT, kwuru, sị: 'Mgbe anyị gbasasịrị ụzọ nkeji iri na ise mbụ, anyị abịala ugbu a kpamkpam. Uto mbu nke ugbo ala ka a na-ebute uto n’aho mbu nke afo. N'aka nke ọzọ, mmefu ọnụego mgbanwe na ọgụ ọgụ e-agagharị nwere mmetụta na-adịghị mma. ”
Mmụba ahịa Cayenne na-abawanye
Porsche AG nyefere 2019 puku 133 ugbo ala uwa nile na ọkara mbu nke 484. Nke a kwekọrọ na mmụba nke 2 pasent tụnyere otu oge nke afọ gara aga. N'ime oge a, nnyefe Cayenne ruru nkeji 45 puku 41 site na mmụba nke pasent 725. Modeldị kacha ere ere n'ụwa niile gara n'ihu bụrụ Macan nke nwere otu puku 47 367.
Porsche nwetara uto 28 na China na njedebe nke June. Ntinye aka na Asia-Pacific, Africa na Middle East ruru ụgbọ ala 20 puku 57, na-abawanye site na 397 pasent ma e jiri ya tụnyere otu oge nke afọ gara aga. Na US, Porsche jisiri ike ịkwado ọnọdụ ya na ọkara mbụ nke afọ wee depụta uto 30 na nnyefe 257 puku 3.
Isi okwu n’afọ
Porsche 2019 bu n'uche iwelie ahia n’azu ego. A na-atụ anya mmụba a site na ngwaahịa ọhụrụ dị ka Cayenne Coupé, 718 Spyder na 718 Cayman GT4. Companylọ ọrụ ahụ na-atụkwa anya na obere mmụba na ụtụ ahịa. Rağmen Na agbanyeghi nnukwu ego na mmezi, mgbanwe dijitalụ, mgbasawanye na imezigharị ọnọdụ ụlọ ọrụ anyị, anyị na-achọ ịnọgide na-enweta ebumnuche ego Porsche dị elu, Mes Meschke kwuru.
Minista Turhan: '133 Billion TL Investment in Railways' 25 / 07 / 2019 N'okwu ya na Nzukọ Industrylọ Ọrụ Nkwado nke Istanbul (July), Mịnịsta Turhan kwuru na ọ bara uru iji mezuo nzukọ ahụ n'okpuru isiokwu nkwukọrịta, njem, akụrụngwa na oru ndị dị mkpa n'etiti akụ na ụba na asọmpi zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ anyị ". Ntọala nke Republic of Turkey na-tọrọ ntọala na aku onwe na Turhan Minister kwuru na ọ bụ ihe dị oké edumbet Turkey, ọ sịrị: "Na a ụwa mụụrụ na a zuru ụwa ọnụ ọnụ ọgụgụ nke ahia agha, mkpa nke ụkpụrụ a bụ pụtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa. N'ihi nnwere onwe akụ na ụba nwere mmetụta dynamo dị mkpa nke metụtara ihe niile. Njem njem na nkwukọrịta ihe
Ugbo ala ugbo 50 gafere site na Yavuz Sultan Selim Bridge 26 / 09 / 2016 Yavuz Sultan Selim Bridge nọ na-echere maka 50 110 puku na puku ugbo ala agafe: CHP na ụfọdụ nchekwa gburugburu ebe obibi gbalịrị-egbochi ndị na-ewu nke Yavuz Sultan Selim Bridge njikọ ụzọ ndekọ a gbajiri n'ime ụgbọ ala tupu ọgwụgwụ nke GES. Otu na-aga Osmangazi. Transport, Maritime Affairs na Minista Ntanetị Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim na Osmangazi dị iche iche hụrụ okwu ndị dị egwu. CHP na ụfọdụ ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi na-agbalị igbochi ụlọ ahụ, na-emegide aha ahụ, ọbụna na ntughari ha na-ekwu na ha ga-eji ọgbụgba Yavuz Sultan Selim dochie. A na-eme atụmatụ ụgbọ ala 50 maka mmalite, mgbe ugbo 110 na-agafe na mmiri ebighi ebi. Işi
A wụsara 5 bin m3 ihe dị n'ime akịaray line ma ụgbọ okporo ígwè tụnyere otu puku 977 tọn 08 / 03 / 2017 Akçaray akara 5 3 puku mxnumx ihe a wụsara puku tọn rails na-tọrọ: Kocaeli Metropolitan Municipality, n'ime akporo owuwu nke tram ngo Akçaray eji ọtụtụ ụlọ ihe. Nnyocha ndị dị na nke a na-aga n'ihu n'ihu. Abụọ nke tram ụgbọala Kocaeli-Sekapark abịa a n'ọdụ ụgbọ ala na oge na-eme ka ibe 977 7,2 puku km ogologo tram akara ruo taa mxnumx wụsara ihe, 5 puku tọn okporo ígwè e nwere mgbakọ ahụ. Maka ndị a, ejiri 3 bin 977 obere trifon jiri 36 bin 854 rails. 737 ỌTỤTỤ METREKÜP CONCRETE Ọrụ ahụ gụnyere 100 bin m58 B
Ministry of Transportation na-eji na ụzọ ụgbọ oloko na tren usoro ke Turkey na-azọrọ na-enye ruo 2023 afọ 5 puku Toolkit 02 / 02 / 2012 Ministry of Transport na-Ankara Metro ụzọ ụgbọ oloko ngwá ọrụ kit 324 14 obi ga-ẹkenịmde ke February maka anụ ụlọ na-emepụta 'turnaround mgbochi' pụta. 10 nde euro ahịa mbụ ogbe na percent 30 emeghe Turkish emepụta, 51 percent na ndị ọzọ ọzọ 'anụ ụlọ mmepụta onyinye' chọrọ na set of auctions 'na-emepụta 130 ụgbọala a oge' ndisịn idem na proviso zitere ujo ebili mmiri site na mpaghara na-emepụta na-akwadebe obi. N'okwu ndị dị nro, a ghọtara na 324 nke ụgbọala 40 chọrọ ka 'mezue ozugbo'. Maka ndị na-etinye ego na Turkey, nke a pụtara na 1 ara na-emepụta ugbo 130 ozugbo Türk. Ma na a oge na Turkey ...
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ịzụta 12 Pen Lighting na Ọdụdọ (gụnyere Ịwụnye) maka ngbanwe nke Derince Port Field Lighting na New Technology Saving Systems 21 / 11 / 2012 Ọkụ na ọkụ na ngwá GA-zụrụ REPUBLIC steeti ụzọ ụgbọ okporo ígwè nchịkwa isi ụlọ ọrụ (TCDD) DERİNCE Port arụmọrụ Management Derince Harbor Yard Lighting nke 12 na-agbanwe agbanwe azụmahịa na iji New Technology Azọpụta Systems Pen Lighting na Ọdụdọ Ihe (gụnyere echichi) oriri 4734 Mba nke 19 edemede Public Procurement Iwu ọ ga-ọdịda site na-emeghe usoro. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru: Obi Registration Number: 2012 / 164724 1-Administration a) okwu: Osimiri na Mah. Liman OKPOROỤZỌ 41900 DERİNCE / Kocaeli b) Telephone na fax nọmba: 2622397300 - 2622234278 c) E-Mail Address: fatmaguneroner@tcdd.gov.tr ​​...
Nkwupụta Obi Ọjọọ: A ga-arụ ọrụ ọkụ ọkụ (Goncalı Station Maneuver Lighting) 22 / 08 / 2016 A ga-eme ka ìhè TC STATE RAILWAY GENERAL DIRECTORATE (TCDD) 3. N'ógbè NA-ewu ihe onwunwe Management Goncalı Station nghogbu ngosi ọrụ owuwu ga-ọdịda site na-emeghe usoro Mba 4734 19 edemede dị ka ọha na eze ị nweta iwu. Ihe ọmụma zuru ezu banyere obi na-depụtara n'okpuru. Obi Registration Number: 2016 / 328381 1-Administration a) okwu: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR b) Telephone na fax nọmba: 2324640928 - 2324640928 c) E-Mail Address: c) obi akwụkwọ Internet adreesị nwere ike hụrụ ebe a: https: / a) Ogo, ụdị na oke nke ọrụ owuwu ahụ na-agbanye nro /
E nyere ndị ọkwọ ụgbọ ala 36 ahụhụ na ọnwa iri mbụ na Uşak 17 / 11 / 2014 E nyere ndị ọkwọ ụgbọ ala 36 ahụhụ na ọnwa iri na mbụ na Uşak: Nchịkọta okporo ụzọ okporo ụzọ okporo ụzọ okporo ụzọ na-achịkwa Gọvanọ Seddar Yavuz. Ná nzukọ a na-enwe n'ụlọ nzukọ nke Gọọmenti Gọọmenti, ọnwa iri nke mbụ nke nyocha 2013-2014, usoro mpụ na nchịkọta ihe mberede enyocha. Gọvanọ Seddar Yavuz kwuru okwu banyere nsogbu ndị a tụlere ná nzukọ Toplantı 2013 ụgbọala na obodo anyị na ọnwa iri mbụ nke ụgbọala 180.808, a na-edezi 33 puku 536 puku 8 nde 539 puku 282 ọkwọ ụgbọ ala. N'ime ọnwa iri mbụ nke 2014, ndị ọkwọ ụgbọala 196.232 bin 36 hụrụ nkwarụ mgbe ị na-elele ngwa ngwa 985 ...
11 500 eriri na Denizli 18 / 09 / 2016 Denisli ropeway 11 na-ebu mmadụ 500 otu ọnwa: ndị Denizli hụrụ ọhụụ ahụ n'anya. 11 fọdụrụnụ na-edepụta ọnụ ọgụgụ maka ọnwa ahụ. 18 afọ gara aga, ọkara nke ndị bi n'ógbè ahụ ebe ọ bụ na October, na okwu ndị ọzọ 500 puku mmadụ ndị na-agba n'ụgbọala ụgbọ ala gara Bagbasi Plateau. Denizli Teleferik, nke e gosipụtara dị ka otu n'ime ihe ngosi ngosi nke Denizli Metropolitan Municipality, ka na-adọta mmasị nke ndị bi n'obodo ahụ. Ụfọdụ n'ime ndị nleta na-abịa site n'èzí nke ógbè ahụ na-agụnye ụgbọ ala ụgbọ ala iji jikọọ na Bağbaşı Plateau. Site na ọdụ mbụ e mere n'ime Kent Forest na Bağbasi Quarter, 1400 na-arụ site na elu elu elu ụgbọ ala. Na 6 X
Xunx 8 puku ndị mmadụ jiri ụgbọ ala Tünektepe kwa ọnwa 05 / 10 / 2017 Antalya 9 ọnwa gara aga meghere cable ụgbọ ala, Tunektepe ka 250 puku ndị mmadụ n'ahụ. Ugbu a, anyị nwere na-egosi Ọdịdị. Antalya Metropolitan Municipality mere cable ụgbọala oghere 9 ọnwa gara aga, Tunektepe ka 250 puku ndị mmadụ n'ahụ. Ke ndidụk oké osimiri ahu na beach na Antalya Sarısu beach 4-5 618 mita na a elu nke degrees oyi karịa Tunektepe onye chọrọ ịkwụsị, na Metropolitan Municipality a na-eji cable ụgbọ ala na mere oghere 9 ọnwa gara aga. 36 200 puku ndị mmadụ kwa hour ulo Tunektepe nkeji cable ụgbọ ala nke na-eduga 9 250 puku ndị mmadụ gosiri mmasị. Mayor Menderes Turel, icheta ọrụ ha na-enye 40 afọ oru ngo "cable ụgbọ ala oru ngo, na-eme ka Tunektepe 7 kpakpando ...
TCDD Monthly 73 Otu puku 720 TL Nbibi nke ụlọ 31 / 08 / 2012 Ụgbọ njem Turkish State (TCDD) Batman-Diyarbakir na-azụ ụgbọ na-eme ka ụmụ ahụ mebie iko iko 380 otu ọnwa. Edere ego nke iko agbaji dị ka 73 puku 720 TL. Kwa afọ, ọtụtụ ndị merụrụ ahụ, ọtụtụ puku pound na-eme ka mmebi nke ụgbọ okporo ígwè ahụ ghara igbochi ya. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), Batman Station Deputy Director Süleyman Bağrıyanık, Batman-Diyarbakir ụgbọ elu nke Southern Express Batman na Diyarbakir mmepụta nke ụmụ ezumike full 380 mgbasa ozi window a ọnwa na nkume, kwuru, sị steeti gbajiri iko a kwa ọnwa na-eri nke na-akpata ngụkọta ọnwụ nke 73 puku 720 TL na ...
Taa na History: 3 August 1948 Cabinet
Minista Turhan: '133 Billion TL Investment in Railways'
Ugbo ala ugbo 50 gafere site na Yavuz Sultan Selim Bridge
A wụsara 5 bin m3 ihe dị n'ime akịaray line ma ụgbọ okporo ígwè tụnyere otu puku 977 tọn
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ịzụta 12 Pen Lighting na Ọdụdọ (gụnyere Ịwụnye) maka ngbanwe nke Derince Port Field Lighting na New Technology Saving Systems
Nkwupụta Obi Ọjọọ: A ga-arụ ọrụ ọkụ ọkụ (Goncalı Station Maneuver Lighting)
E nyere ndị ọkwọ ụgbọ ala 36 ahụhụ na ọnwa iri mbụ na Uşak
11 500 eriri na Denizli
Xunx 8 puku ndị mmadụ jiri ụgbọ ala Tünektepe kwa ọnwa
TCDD Monthly 73 Otu puku 720 TL Nbibi nke ụlọ